Network na Intaneti | September 2019
Editor Si NhọRọ September 22,2019
Ịhazi Asus RT-N12 maka Beeline
Ndị na-eduzi Wi-Fi ASUS RT-N12 na RT-N12 C1 (pịa iji enlarge) Dịka ọ naghị esiri ike ịkọ, tupu ịnye ntụziaka banyere otu esi hazie wiwe Wi-Fi Asus RT-N12 ma ọ bụ Asus RT-N12 C1 ịrụ ọrụ na netwọk Beeline. N'ikwu eziokwu, nkwekọrịta njikọ njikọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-agagharị agagharị na Asus dịka otu - ọ bụ N10, N12 ma ọ bụ N13.
Esi gbanwee paswọọdụ na WiFi rawụta
Ọ bụrụ na ị malitere ịhụ na ọsọ ọsọ Internet site na WiFi abụghị ihe ọ na-adị na ya, ọkụ ndị na-ekiri ihe na-agbanye ọkụ ngwa ngwa ọbụna mgbe ị na-ejighị njikọ waya, mgbe ahụ i nwere ike ikpebi ịgbanwe koodu paswọọdụ na WiFi. Nke a esighi ike ime, na n'isiokwu a, anyị ga-ele anya otú Rịba ama: mgbe ị gbanwee paswọọdụ Wi-Fi gị, ị nwere ike ịchọta otu nsogbu, ebe a bụ ihe ngwọta ya: Ntọala netwọk echekwara na kọmputa a anaghị emezu ihe ndị a chọrọ.
Edeelarị m ntuziaka iri na abụọ banyere otu esi edozi redirect D-Link DIR-300 Wi-Fi iji rụọ ọrụ na ọtụtụ ndị na-enye ha ọrụ. A kọwara ihe niile: ma ngwa ngwa nke router na nhazi nke ụdị njikọ dị iche iche na otu esi edozi paswọọdụ na Wi-Fi. Ihe a niile bụ ebe a. Ọzọkwa, site n'ikwu ya, e nwere ụzọ isi dozie nsogbu ndị kachasị na-ebili mgbe ị na-emepụta onye router.
Ndị na-eme njem na-atụ aro - ndị na-atụ aro ha na ihe kpatara ya
Ana m atụgharị uche mgbe niile: ndị na-agagharị agagharị ka akwadoro maka Beeline, Rostelecom ma ọ bụ onye na-ahụ maka Ịntanetị ọzọ? Ọzọkwa, mgbe ị na-arịọ maka enyemaka maka ịtọlite ​​redirect Wi-Fi, ọ na-eme na mgbe ị na-akpọ ọrụ nkwado, ọ bụrụ na ị kwụsịghị n'ụzọ ọ bụla ịzụta onye rawụta site na onye na-eweta ya, mgbe ọ dịkarịa ala, ha na-ekwu na ekwesighi ịkwado gị .
N'ịga n'ihu usoro usoro ntụziaka maka ndị na-emegharị redio D-link Wi-Fi, taa, m ga-ede banyere otu esi agbawaa DIR-620 - onye ọzọ na-ewu ewu ma, a ghaghị ịdebe ya, onye ntanetị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Na ntụziaka a, ị ga-amụta ebe ị ga-ebudata DIR-620 ọkachamara (onye ọrụ gọọmenti) na otu esi echekwa onye na-ahụzi ihe na ya. M ga-adọ gị aka ná ntị n'ọdịnihu na isiokwu ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na DIR-620 firmware na Zyxel software bụ isiokwu nke isiokwu dị iche iche nke m ga-ede n'oge na-adịghị anya, ma kama nke ederede a, m ga-ejikọta ihe a na ebe a.
Ozi na-edeghị ede na-edeghị aha - ọrụ kachasị mma n'ịntanetị
Ezi ụbọchị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ Ịntanetị nwere ozi nke ha (Yandex, Google, Mail, wdg. Ọrụ na-ewu ewu na Russia). Echere m na onye ọ bụla na-eche eziokwu ahụ bụ na mail bụ nnukwu spam (ụdị ọkwa nkwado, nkwalite, ego, wdg). Dịka, ụdị spam ahụ malitere ịbanye mgbe ị debanyere aha na saịtị dị iche iche (ọtụtụ mgbe).
Google ga-emechi nchekwa igwe ojii ya
Ụlọ ọrụ Google malitere ezigbo rebranding n'oge na-adịbeghị anya. Mbụ, na android akwụ ụgwọ usoro na gam akporo Wear smart nche e renamed. A na-eji Google akwụ ụgwọ ma weghaa os, edozi ha. Ụlọ ọrụ ahụ akwụsịghị na nke a na nso nso a mara ọkwa mmechi nke Google Drive, nke a maara na Russia dịka Google Drive.
Ndị nsụgharị kachasị mma na akwụkwọ ọkọwa okwu (Bekee - Russian)
M na-eme atụmatụ ịmepụta isiokwu a na ndị nsụgharị na akwụkwọ ọkọwa okwu dị ka ndị a: akụkụ nke mbụ ya dị mma maka ndị na-adịghị amụ Bekee ma ọ bụ na-asụgharị ọrụ, na nkọwa m banyere àgwà nsụgharị na ụfọdụ nuances nke iji. N'ikpeazụ, ị ga-enwe ike ịchọta ihe bara uru maka onwe gị, ọbụlagodi na ị bụ onye gụrụ asụsụ Bekee ma na-amụ ya maka ihe karịrị otu afọ (ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịpụta na ị maara banyere ọtụtụ n'ime atụmatụ ndị edepụtara n'elu).
Esi esi n'aka Rostelecom mee njem n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ọnọdụ GameRanger
Isiokwu a ga-abụ otu esi "Ro" "Roastelecom" na-atụgharị ọdụ ụgbọ mmiri dị na GameRanger (nke a na-eji eme egwuregwu n'ịntanetị). M na-arịọ mgbaghara tupu oge eruo n'ihi na enweghi m ike ịnweta nkwenye na nkọwa (ọ bụghị ọkachamara na mpaghara a, ya mere, m ga-anwa ịkọwa ihe niile na asụsụ nke m).
Ịhazi D-Link DIR-300 maka TTK
Na ntuziaka a, usoro a ga-emepụta usoro nke ịhazi wiwe Wi-Fi D-Link DIR-300 maka onye na-ahụ maka ọrụ Ịntanetị TTK. Ntọala ndị a kwadoro ziri ezi maka njikọ PPPoE nke TTK, nke a na-eji, dịka ọmụmaatụ, na St. Petersburg. N'ọtụtụ obodo ebe TTK nọ, PPPoE na-ejikwa ya, n'ihi ya, ọ gaghị enwe nsogbu na ịhazi ụrọ DIR-300.
Nyefee faịlụ site na Wi-Fi n'etiti kọmputa, ekwentị na mbadamba na Filedrop
Iji nyefee faịlụ site na kọmputa na kọmputa, ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla enwere ọtụtụ ụzọ: site na draịvụ flash USB na netwọk mpaghara na nchekwa igwe ojii. Otú ọ dị, ọ bụghị ha nile dị mfe na ngwa ngwa, ụfọdụ (mpaghara netwọk mpaghara) chọrọ onye ọrụ ịhazi ya. Isiokwu a bụ ụzọ dị mfe iji nyefee faịlụ site na Wi-Fi n'etiti ihe ọ bụla ngwaọrụ ejikọtara na otu onye na-ahụ maka Wi-Fi site na iji usoro Filedrop.
Ịhazi ihe ngbanye DIR 300 NRU n150
Enwere m ike iji ntuziaka ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ na-esi esi agbanwe ngwa ngwa ahụ ma mezie ndị na-aga Wi-Fi nke D-Link DIR-300 rev. B5, B6 na B7 - Ịhazi ihe ntanetị D-Link DIR-300 Ntuziaka maka ịhazi Dọkota D-Link DIR-300 na ngwa ngwa: rev.B6, rev.5B, A1 / B1 dịkwa mma maka onye na-ahụ maka D-Link DIR-320. ngwaọrụ ma jikọọ ya dị ka ndị a: WiFi router D-Link Dir 300 azụ Anyị na-ekpuchi eriri Na jaak a na - akpọ Intanet, jikọọ akara nke onye na - ahụ maka ịntanetị Na otu n'ime ja anọ a kpọrọ LAN (n'agbanyeghị ihe), jikọọ eriri ma jikọọ na kọmputa nke anyị ga-ahazi router.
Ntuziaka maka configuring onye rawụta TP-Link TL-WR740N
Ndewo Ịtọlite ​​onye na-agbanye router dị nnọọ mfe na ngwa ngwa, ma mgbe ụfọdụ, usoro a na-aghọ ezigbo "ihe isi ike" ... TP-Link TL-WR740N onye na-ahụ maka ihe ntanetị bụ ụdị na-ewu ewu, karịsịa maka iji ụlọ eme ihe. Na-enye gị ohere ịhazi mpaghara LAN ụlọ na ịnweta Ịntanetị maka ngwaọrụ mkpanaka na ngwaọrụ ndị na-abụghị nke ekwentị (ekwentị, mbadamba, laptọọpụ, PC arụmọrụ).
Esi gbanwee ọwa Wi-Fi rawụta
Ọ bụrụ na ị zutere ikuku ikuku na-adịghị mma, nkwụsị Wi-Fi, karịsịa site n'iji okporo ụzọ dị arọ, yana nsogbu ndị ọzọ yiri ya, ọ ga-ekwe omume na ịgbanwanye Wi-Fi na ntọala nke router ga-enyere aka dozie nsogbu a. Otu esi achọpụta ma ọ bụ ebe kachasị mma ịhọrọ na ịchọta n'efu ka m dere n'ime isiokwu abụọ: Otu esi achọta ọwa n'efu na iji ngwa na Android, Chọọ ntanetị Wi-Fi n'efu na inSSIDer (usoro PC).
Kedu ka esi budata ngwa ngwa site na onye na-eresị faịlụ?
Na mgbakwunye na iyi, otu n'ime ọrụ ndị na-ewu ewu faịlụ bụ ndị ntanetị faịlụ. N'ihi ya, ị nwere ike ibudata ma budata faịlụ ahụ na ndị ọrụ ndị ọzọ. Enwere otu nsogbu: dịka iwu, enwere mgbasa ozi dị ukwuu na ndị na-agbanwe ihe ntanetị, ihe ngbochi dị iche iche nke ga-ewe oge dị ukwuu, ebe ị nwere ike ibudata faịlụ a na-achọsi ike ... maka ndị na-emeso ha mgbe mgbe.
Kedu aha paswọọdụ Wi-Fi?
Nke a abụghị isiokwu zuru ezu, kama ụdị nnwale. Ihe achọrọ m ga-achọ ịjụ gị ka ịdee paswọọdụ Wi-Fi gị na nkwupụta maka isiokwu a. Echegbula, mụ onwe m na ndị ọzọ na-enweghị ike iji ozi a maka ụfọdụ nzube ọjọọ. Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị, biko dee ihe dị n'ime paswọọdụ ahụ n'ụzọ dị otú a: Ejiri asatọ dị ka ọnụ ọgụgụ Aha na Bekee Ụbọchị ọmụmụ Aha ikpeazụ + Aha Ụjọ egwu nke mkpụrụ edemede na akwụkwọ ozi, ụzọ 13 nke ọma, na mmụọ a.
Otu esi eweghachi ibe na ibe klas
Ya mere, ebe ọ bụ na ị nọ ebe a, ị ghaghị iweghachite akwụkwọ ahụ na ụmụ klas gị mgbe ihe ụfọdụ si na nke a: Ebinyere akwụkwọ ahụ, paswọọdụ gị adabaghị. Egbochi Odnoklassniki netwọk mmekọrịta n'onwe ya maka otu ihe ma ọ bụ ọzọ. Ị onwe gị ehichapụwo ibe gị. Enwere m ike imechu gị ihu, ma na ikpe ikpe a, ihichapụ profaịlụ gị dịka akọwapụtara na isiokwu Ị ga-esi ehichapụ ibe gị na ụmụ klas gị, ị si otú ahụ jụ ọrụ ọrụ netwọk ahụ na mgbake na-agaghị ekwe omume, dịka a dọrọ aka ná ntị.
Ịhazi D-Link DIR-615 K1 maka Beeline
Onye ntanetị Wi-Fi D-Link DIR-615 K1 Nduzi a ga-atụle otú ị ga-ahazi router Wi-Fi D-Link DIR-300 K1 iji rụọ ọrụ na Bealer. Ịtọlite ​​redire na redio a na-ewu ewu na Russia na-emekarị ihe isi ike maka ndị nwe ya, na ihe niile Beeline Internet nwere ike ịkwado na ị na-etinye ihe ntanetị arụmọrụ ha, nke, ma ọ bụrụ na anaghị m ezighi ezi, ka a gaghị enweta maka ihe nlereanya a.
DNS 8.8.8.8 si na Google: gini ka ọ bụ na otu esi edebanye aha?
Ezi ehihie Ọtụtụ ndị ọrụ, karịsịa ndị na-eji kọmputa maka oge mbụ, nụrụ banyere abbreviation nke DNS dịkarịa ala otu (na nke a na ọ bụghị kọmputa ngwaike store :)). Ya mere, ọ bụrụ na enwere nsogbu na Ịntanetị (dịka ọmụmaatụ, Intaneti emeghe ogologo oge), ndị ọkachamara ahụ nwere ahụmahụ, na-ekwu na: "nsogbu ahụ yiri ka ọ metụtara DNS, gbalịa gbanwee ya na DNS nke DNS 8.
Esi gbanwee adreesị IP nke kọmputa ahụ?
Ezi ụbọchị! A na-achọ ịchọrọ adreesị IP, mgbe mgbe mgbe ịchọrọ ịchekwa ịnọ gị na saịtị ụfọdụ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na otu saịtị adịghị enweta site na obodo gị, na site na ịgbanwe IP, enwere ike ile ya anya ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ maka imebi iwu nke saịtị (dịka ọmụmaatụ, ha eleghị anya iwu ya ma hapụ okwu banyere isiokwu ndị a machibidoro iwu) - onye nchịkwa na - amachibido gị iwu site na IP ... Na nke a dị mkpirikpi, achọrọ m ikwu banyere ọtụtụ ụzọ isi gbanwee adreesị IP nke kọmputa (site n'ụzọ, IP nwere ike gbanwere IP nke ọ bụla mba, dịka ọmụmaatụ, American ...).